DAAWO HOSPITAL DAAWEYNTA DADKA NALA SOO XIRIIR TEL +16316010861 AMA +447477751355: Murqo xanuun
DAAWO HOSPITAL DAAWEYNTA DADKA NALA SOO XIRIIR TEL +16316010861 AMA +447477751355
DAAWO DHIREEDKA XAL MUHIIM U AH BANII AADAMKA HADDII WICITAAN KA MAREYKANKA FREE KUU YAHAY AMA AAD ADEEGSATO VIBER KA WAXA AAD NA GA LA SOO XIRIIRI KARTAA TEL KA AH +16316010861 SIDOO KALE WhatsApp WAXAAD NAGA HELEYSAAN +447477751355 MEEL KASTA OO AAD DUNIDA KA JOOGTO DAAWOOYINKA WAXAA LAGUUGU SOO GAARSIINAYAA QAABABKA D.H.L KA BOOSTADA GUDAHA KENYA NA PARCELS Email us nalasooxiriir@live.com nalasooxiriir@doctor.com nalasooxiriir@gmail.com nalasooxiriir@consultant.com
TOOS ULA XIRIIR DHAQAATIIRTA +16316010861 AMA +19149775731
+16316010861 AMA +19149775731
NUMBARKA HORE WAXAAD U ADEEGSAN KARTAAN WICITAAN KA TOOSKA IYO VIBER INTABA
MAHAD SAN TIHIIN
WAXAAD SI TOOS AH NAGA LA SOO XIRIIRI KARTAAN TELKA KALA AH +16316010861 AMA +19149775731
VIBER KU WAA +16316010861 +447477751355 XIRIIRKA TOOSKA WAA +16316010861 +390918777633
+16316010861 AMA +16316010861 MAHAD SANIDIIN
WAXAAD DHAQAATIIRTA KULA KULMI KARTAA ONLINE KA ADEEGSO VIBER NUMBER KA AH +16316010861
HADDII WICITAAN KA MAREYKANKA FREE KUU YAHAY WAXAAD NA GALA SOO XIRIIRI KARTAA TEL KA AH +16316010861Waxaad dhaqaatiirta kula kulmi kartaa online ka adigoo adeegsanaya emailada kala ah nalasooxiriir@gmail.com nalasooxiriir@doctor.com Mahad sanidiin
NUMBERADA KALA AH +16316010861
AMA KAN KALE EE AH +447477751355
HADDII WICITAAN KA DALKA MAREYKANKA UU FREE KUU YAHAY AMA AAD ADEEGSATO VIBER KA WAXA AAD NA GA LA SOO XIRIIRI KARTAA TEL NUMBER KA
SIDOO KALE WAXAAD SI TOOS AH DHAQAATIIRTA KULA KULMI KARTAA ONLINE KA WAQTI KAMIDA 24 KII SAAC CINWAAN KU WAA
wuxuuna ku dhacaa hal muruq iyo in ka
Murqo xanuunku waxaa la socon kara
mergiyo xanuun, seedo xanuun, Lafo xanuun iyo xanuun ku dhaca soohyada
isku haya murqaha iyo xubnaha la
xiriira ba. Murqo xanuunku badanaa
xiriiraa kacsanaanta qofka, welwelka,
murqaha oo aad loo adeegsado ama jug ka soo gaarta jimicsi ama shaqo culus.
xaaladahaasi xanuunku wuxuu ku
dhacaaa murqaha kaliya ee culeyska la
saaray ama dhaawaca soo gaaray
wuxuuna bilawdaa isla markii dhibku
dhaco ama jimicsiga ama hawshu dhamaato. taasi oo u sahleysa qofka
inuu ogaado waxa u keenaya murqo
xanuunka. Murqo xanuunka wuxuu kaloo
u noqdaa dhibaatooyin kale oo
saameeya jirka oo idil sida caabuqidda (infakshannada), tusaale ahaan ifilada/
Wuxuu kaloo calaamad u noqon karaa
cudurro asiiba murqaha iyo soohyada
isku haya jirka oo dhan sida cudurka loo
yaqaanno "Lupus" ee haweenka u badan. Waxaa kaloo jira cudurro sidoo daba ku
dhaca murqaha kaliya oo badanaa
calaamado kale wadan. Sababaha keena
murqo xanuunka Waxyaabaha ugu caan
san ee keena
murqo xanuunka waxaa ka mid ah: 1:Dhaawac ama jug soo gaaray murqaha
sida murgacashada ama culeys xad dhaaf
ah oo la saaro.
2: In adeegsiga murqaha laga badiyo
ama si dhakhso ah loo isticmaalo taasoo
muruqa u adkaysan karin. 3: Kacsanaanta iyo welwelka qofka.
4:Qaadashada daawooyinka qaar sida
daawooyinka loo yaqaanno "ACE
inhibitors" ee hoos loogu dhigo
5: Daawooyinka"Statins" ee lagu yareeyo dufanka
Kolistaroolka iyo daawada "Cocaine" ee
lagu yareeyo xanuunnada, dadka
qaarkood na qabatimaan.
6: Huridda iyo balbalidda wadajirka
murqahaiyo oogada ee loo yaqaan "Dermatomyositis"
7: Carqalad ku timaada macdanta jirka ku
jirta sida soodyamka, bootaasyamka iyo
8: Cudurka "Fibromyalgia" oo kudhaca
murqaha iyo soohyada dunta ah ee loo yaqaanno "Fibrous".
9: Infakshannada oo ay ka mid yihiin:
ifilada, malaariyada, muruq-malaxawga,
dabeysha iyo gooryaannada qaar.
10: Cudurka "Lupus" ee dhaawaca
murqaha iyo maqaarka. 11: Cudurrada keena murqo-lafo
sida roomaatiisam ka lafaha iyo murqaha
ee loo yaqaano
"Polymyalgia rheumatica" iyo
"Polymyositis" 12: Cudurka sumoobidda murqaha ee
"Rhabdomyolysis" (soohyada murqaha
ayaa go'go'a sun darteed)
Sidoo kale cudurada keena murqo
xanuunka waxaa safka hore kaga jira
ugu na badan murqo xanuunka dadkeena soomaalida ka cawdaan cudurka
baabasiirka oo isaga ah cudur saameeya
qeybaha ugu muhiim san jirka banii
aadamka wuxuu na bur buriyaa difaaca
jirka. Sidoo kale waxaa kamida
xanuunada sababa murqo xanuunka gaaska ku dhaca caloosha.
Sidoo kale cudurka sonkorowga ayaa
isaguna keeni kara murqo xanuun.
Nafaqo darida ayaa ka mida wax
yaabaha sahli kara in qofka ku dhaco
murqo xanuun. Waxaa ka mida xanuunada keeni kara murqo xanuunka
iyo lafo xanuun ka ba marka uu ku dhaco
( quumanka ) caabuq infakshan ah oo ay
sababto nooc kamida bacteri yada ayaa
hadii aan deg deg loo daaweeyn keeni
karta iney dhiiga u gudbiso lafo xanuunka iyo muqo xanuunka
roomaatiisamka loo yaqaano ugu
dambeyntana hadii aan deg deg loo
daaweyn u sii gud ba wadnaha iyadoo
keenta roomaatiisamada wadnaha.
hadii aad isku aragto murqo xanuun joogta ah ama uu la socdo lafo xanuun
ama uu ku hayo xanuunada keena murqo
xanuunka la soo xiriir dhaqaatiirta ka
howl gasha website kan dhaqaatiirta
waxey gacan kaa siineysaa ogaan shaha
waxa sababaya murqa xanuun kaada iyo daaweyn rasmi ah oo ku haboon xanuun
kaada si fudud noogu soo gudbi hadii aad
isku aragto murqo xanuun iyo lafo
xanuun joogta ama aad ku aragto
ehelkaada asxaabtaada waxaan diyaar u
nahay inaan ku caawinno inshaa allaah. Mahad sanidiin.